स्ट्रिङ सेम - उपयोगी गुणहरू
हरियो, वा asparagagus बीन्स पौधे को परिवार संग सम्बन्धित छ। सुरुमा, केवल अनाज खानाको लागि प्रयोग गरिएको थियो। पहिलो पटक खाना पकाउने सबै पोडहरू इटालीमा XVIII शताब्दीमा प्रयोग गर्न थाले। दशकौंको लागि, प्रजननहरूले किराको पोडका साथ किस्महरू बाहिर ल्याएपछि पछि तिनीहरूले संसारभरका उनीहरूको अभिनय पाए। सीआईएस देशहरूमा, बढ्दो र राम्रो स्वादमा बेग्लैपनको कारण सबैभन्दा लोकप्रिय चिन्ता सेम।
मासु र माछाको भाडाको साथ हरी सेम संग सूप वा स्टव संग मेल खान्छ। यो बल्गेरियाई काली मिर्च, टमाटर, प्याज, आलु, बलुआ र बिरुवा संग राम्रोसँग जोडिएको छ।
हरियो सेमको उपयोगी गुण
यस बीनको उपयोगी गुणहरू विभिन्न भिटामिन, माइक्रो-म्याक्रोप्लेटको सामग्री द्वारा निर्धारण गरिन्छ। हरियो बीन्सको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता पारिस्थितिक अनुकूलता हो। दूषित क्षेत्रहरूमा पनि गइन्छ, यसले हानिकारक पदार्थलाई अवशोषित गर्दैन
भिटामिन सी - प्रतिरक्षा प्रणालीलाई समर्थन गर्दछ र रोगहरूको विकास रोक्छ।
प्रोटिटिन एले आँखाको स्वस्थ कार्यलाई समर्थन गर्दछ, छालालाई बलियो बनाउँछ, माइक्रस झिल्लीहरूको बाधाको प्रतिरोध बढाउँछ (भाइरस र जीवाणुलाई गल्ती र नाकमा सक्रिय रूप देखि विकास गर्नबाट रोक्छ), हड्डी ऊतक र दाँतलाई बलियो बनाउँछ।
बी भिटामिन कोशिकाओं को बीच ऊर्जा चयापचय मा भाग लेछन, मस्तिष्क को पोषण गर्दछ, तंत्रिका कोशिकाहरु संग आवेगहरुको प्रसारण को बेहतर बनािन्छ।
स्ट्रिङ बीन भिटामिन ई मा समावेश भएको हृदय रोग प्रणाली को अंगहरुलाई मजबूत गर्दछ, हार्मोनल अवरोधहरु लाई समाप्त गर्दछ, थकान को राहत दि्छ, ऊर्जा दि्छ।
फोलिक एसिड तंत्रिका तंत्र को लागि अपरिहार्य खाना हो। रक्त कोर्स्पुप्स, एनीमिया को लागि एक निवारक र curative उपाय गठन को प्रक्रिया मा भाग।
हरियो बीन्सको संरचना खनिजहरू - शरीरमा सबै ऊतकहरूको अभिन्न भाग, यसमा बिस्तारै, मात्र, खाना संग।
लोहा सामग्रीले रातो रगत कक्षको गुणस्तर र ग्याँस एक्सचेंजको क्षमता बढाउँछ।
जिंक प्रोटीन को एसिमिलेशन को लागी आवश्यक छ, यसले संक्रामक छाला मा कस्मेटिक एजेंटहरु भन्दा पनि खराब नहीं गर्छन, दरार को उपचार गर्दछ, बाल विकास को गति बढाता छ।
सेमको सल्फर संक्रामक रोग पछि आंत बहाल गर्छ, छालाको अवस्था सुधार गर्दछ।
फाइबरबाट पाचन प्रक्रियाहरूको लागि हरियो सेमको ठूलो लाभ यसमा समावेश छ। यो सुप्रो सेममा भन्दा कम छ, त्यसैले यो पाचन रोगहरु को एक्स्टेरेसन को समयमा प्रयोग को लागि उपलब्ध छ। ग्रीन बीन्सको प्रयोगले ब्रोंटेइटिस र ग्यूमेटिज्मको निष्कर्षलाई कमजोर पार्छ, एक मूत्रिक प्रभाव छ, लवण को उत्तेजना को बढावा दि्छ, गाउट र यूरोलिथियास को उपचार गर्दछ।
हरियो बीन एक आहार उत्पादन हो जुन अन्य फलहरु भन्दा बढी उपयोगी छ। त्यस्ता सेमहरुमा2ग्राम प्रोटीन, 0.2 ग्राम को वसा, कार्बोहाइड्रेट को 3.6 ग्राम। यसमा एक धेरै नाजुक "तेल" स्वाद छ, त्यसैले यो वसाको ठूलो मात्रा को अतिरिक्त आवश्यकता छैन।
पाक कला स्ट्रिङ धेरै सरल र छिटो छ, किनभने यसले 4-5 मिनेट पकाउँछ। वैसे, जाडो मा यो जमे भएका स्ट्रिंग बीन्स खपत गर्न सम्भव छ, र यसको फाइदा ठंड प्रविधि को संरक्षण संग रहनेछ।
खाना पकाउन, जवान लोचदार हल्का हरियो पोडहरू छनौट गर्नुहोस्, किनकि अति स्वाद गुमाउन र लामो समयको तयारी गर्दै छन्। पकाउन अघि, पोड धेरै घण्टाको लागि चिसो पानीमा भिजेको छ, कठोर समाप्त भएपछि हटाइयो। तिनीहरूलाई बन्द ढक्कन अन्तर्गत पकाउनुहोस्, त्यसपछि ठण्डे पानीसँग कुल्ला गर्नुहोस्। जडी बूटी, मसाले र मक्खनको टुक्राको साथ समाप्त भित्री सेवा गर्नुहोस्।
वजन घटाने बीन्स
वैज्ञानिकों साबित भएको छ कि विराटनगर को उपयोग कार्बोहाइड्रेट को पाचनता को अवरुद्ध गर्दछ, विशेष रूप देखि उन स्टार्च देखि प्राप्त भएको छ, जो एक लामो समय को लागि तपस्या को भावना पैदा गर्दछ। अझै पनि त्यस्तो सेमहरू हल्का सलादहरू, नाकाहरूका लागि राम्रो संघटक हुन् र पर्याप्त रूपमा उच्च-क्यालोरी साइड बर्तनहरू बदल्न सक्छन्। अनलोडिङ दिन र विभिन्न कम-क्यालोरी डाईटहरूको लागि उपयुक्त रूपमा, जसमा यसले सबै साइड बर्तनलाई प्रतिस्थापन गर्दछ।
लेमनमा - राम्रो र खराब
खट्टे फलोंको सुन्तला गुण - सुन्तला र टेंगाइनरी
ब्ल्याकबेरीमा के भिटामिन छन्?
टर्कीको जिगर राम्रो र खराब छ
रातो तरबूज वजन घटाने को लागि
ओरिएटल कुकीज - कैलोरी सामग्री
माछाको क्यालोरी सामग्री
अमरनथ आटा राम्रो र खराब छ
कसरी महाराजको सहयोगको साथ वजन घटाउने?
मधुमेह mellitus संग उत्पादन
प्रतिरक्षाको लागि भिटामिन
ताज तेल हानिकारक छ?
शीइकेक मशरूम - राम्रो र खराब
टुक्रा टुक्रा बनाउने कसरी?
महिलाको स्टोर्स रिबोक
आफ्नै हातले भान्सा बनाउने
डोनाल्ड ट्रम्पको पूर्व-पत्नीसँग न्यूनर्क पोस्टमा एक साक्षात्कार साक्षात्कार
अब कुन आत्माहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन् - 2015
पल्स 90 प्रति मिनेट बीट - यो सामान्य हो?
खट्टा क्रीममा गुलाबी सामन
सांप र साँप महिला - संगतता
अजरबैजानी शैली मा मासु संग कुटीब
मिस्ड मासुको साथ पास्ता - क्लासिक इटालियन बर्तनको सबैभन्दा स्वादिष्ट र नयाँ व्यञ्जनहरु
एएलटी र एएसटी - महिलाहरु मा आदर्श
सर्दिकाको लागि एडाज्कामा बिरुवाहरू नसकेको बिना
केटलले बन्द स्केल कसरी धुने?
सारा पलसन र उनको प्रेमिका
साउसेज पनीरसँग सलाद
निराशा - कारणहरू
खरानी खाडी-उपचार स्थानीय तरिका
स्टेनलेस स्टीलबाट धुमखाना